Kuhlelwa ukuqeqeshwa kosomabhizinisi | News24
Kuhlelwa ukuqeqeshwa kosomabhizinisi
Osomabhizinisi abebehambele umcimbi wokuhlelwa kokuqeqeshwa kosomabhizinisi IsITHOMBE: THAMI KA-NKOSI
INHLANGANO yosomabhizinisi i-Ugu Association of Businesses ibe nokhukhulela ngoqo wokuqeqeshwa kosomabizinisi abancane ngoLwesithathu olwedlule ehholo elisenkabeni yedolobha iCivic centre.
Loluhlelo belwenziwe ngokubambisana nezinhlaka zikahulumeni namabhizinisi azimele.
UMnuz Thanda Ncane ongusihlalo walenhlangano uthe kubaluleke kakhulu ukuba osomabhizinisi bathole ukuqeqeshwa okufanele ukuze bakwazi ukuba namakhono adingakalayo ukukhulisa amabhizinisi abo.
Uthe okunye okubaluleke kakhulu ukuqinisekisa ukuthi osomabhizinisi bazi ukuba imiphi imigudu okumele bayilandele ukuqinisekisa ukuthi bawaphatha ngendlela efanele amabhizinisi abo.
“Baningi osomabhizinisi abakhona kodwa bagcina bengakwazi ukuthola imisebenzi ngisho emincanyana kahulumeni ngoba basuke bengaqeqeshiwe ngisho nangokugcwalisa amafomu uma kumele bathole uxhaso namathenda kahulumeni,” kusho uMnuz Ncane.
Uqhuba wathi kumele kubekhona uhlelo olucacile lokuthi ikuphi okumele kwenziwe ukuba osomabhizinisi bathole ukulekelelwa nokuhlomiswa ngolwazi izihlandla eziningi.
UMnuz Ncane ube esegxeka kakhulu inhlangano yosomabhizinisi efuna ukudla imisebenzi komasipala ngodli, wathi lokho abahambisani nakho futhi kumele inqandwe ekutheni imise imisebenzi eyenziwayo ngoba lokho kuyobe kusho ukuphazamisa ukuthunyelwa kwezidingo emphakathini.
“Siyazi ukuthi abanye balabosomabhizinisi bakhona ngaphansi kwenhlangano yethu, kodwa asizibandakanyi ekutheni kungenwe ngendlovuyangena emahhovisi omasipala kanye nokusabisa labo abathola imisebenzi.
“Uma kukhona lapho benokungagculiseki khona kumele kube ngukuthi izinto zixoxwa ngendlela zilungiswe ngale kwempi,”kuchaza yena.
UMnuz Themba Zondi ongunobhala walenhlangano uthe abanye osomabhizinisi kuze kubonakale sengathi bayahluleka ukwenza umsebenzi kanti inkinga ukuthi abanawo amakhono afanele okuqhuba amabhizinisi.Uveze ukuthi njengoba uhulumeni eseqhamuke nohlelo lokuthi osomabhizinisi abancane bakwazi ukwenza imisebenzi emikhulu kanye nokuthuthukisa umnotho kumele bazibandakanye nezinhlaka ezizobasiza bathole ulwazi olufanele.